WARBIXIN: Kaddib Dhaawacii Van Dijk Oo Muddo Dheer Maqnaanaya, Waa Kuwee SIDDEEDA Difaac Ee Liverpool Lasoo Saxeexan Karto Bisha Janaury – Laacibnet.net
WARBIXIN: Kaddib Dhaawacii Van Dijk Oo Muddo Dheer Maqnaanaya, Waa Kuwee SIDDEEDA Difaac Ee Liverpool Lasoo Saxeexan Karto Bisha Janaury
Liverpool ayaa dhibaato xun la kulantay Sabtidii shalay markii ay 2-2 ku kala baxeen Everton, waxaana daqiiqaddii 11aad ee ciyaartaas garoonka laga saaray laf-dhabarta difaaca Reds ee Virgil van Dijk oo ah laacibka loo nisbeeyo inuu sababta u ahaa guulihii ay Liverpool ka gaadhay Champions League iyo Premier League.
Goolhayaha Everton ee Jordan Pickford ayaa kusoo booday oo jilibka dhaawac culus ka gaadhsiiyey, waxaana nasiib wanaag uu Pickford ka badbaaday in wax kaadh ah la siiyo iyadoo la isku raacsan yahay inay ahayd in lagu ciqaabo qaladka uu sameeyey.
Liverpool ayaa dhaawacani dhibaato weyn ku yahay, waxaana markii uu Van Dijk baxay soo galay Joe Gomez oo ka garab ciyaaray Jol Matip oo muddo dheer oo uu dhaawac ku maqnaa kaddib kusoo laabtay garoomada kulankii xalay.
Sida uu ku warramay telefishanka beIN Sports, Van Dijk ayuu dhaawacu kasoo gaadhay qaybta hoose ee jilibka ee lafaha laabtooyinka iyo carjowda, taas oo haddii ay dhab noqoto uu kaga maqnaan doono dhamaan xili ciyaareedkan oo kaliya shan kulan ay kooxdiisu dheeshay.
Muddo toddoba illaa siddeed bilood ah ayaa la qiyaasayaa in uu Van Dijk maqnaanayo, waxaanay taasi jab weyn ku tahay tababare Jurgen Klopp oo aan kooxdiisa ku haysanin ciyaartoy u dhigma, sidoo kalena ay adag tahay in suuqa laga soo helo difaac kale oo u dhigma.
Xiddigan oo Liverpool ay £75 milyan oo Gini kaga soo iibsatay Southampton markii ay taariikhdu ahayd January 2018, ayaa waxa haddaba la sheegayaa in Liverpool ay isku diyaarinayso inay suuqa u gasho difaac ay soo iibsato bisha January oo booskaas kasii ciyaaari karaya, waxaanay warbaahintu soo bandhigeen magacyada siddeed difaac oo ay ku jiraan laacibiintii ay kooxaha badan ku dagaallamayeen.
21 jirkan u dhashay Faransiiska ee u ciyaara kooxda reer Germany ee RB Leipzig ayaa si weyn loola xidhiidhinayay Manchester United, waxaana lagu tiriyaa inuu yahay xiddigaha ugu fiican ee difaaca ah ee qaaradda Yurub, taas oo uu ku caddeeyey sidii tayada lahayd ee uu iskugu muujiyey tartanka Champions League xili ciyaareedkii hore, gaar ahaan kulamadii ay kooxdiisu ku garaacday Tottenham.
Difaacan reer Senegal oo kooxaha waaweyn ee Premier League ay ku dagaallamayeen sannadihii ugu dambeeyey, laakiin aanay midkoodna lasoo saxeexan lacagta ay Napoli ku xidhay oo qaali ah darteed, ayaa la sheegay in hadda ay Liverpool kiishkeeda lacagta u jabin doonto.
Xiddigan oo bisha June ee sannadka dambe ay da’diisu noqon doonto 30 jir, ayaa ah khabiir difaac oo lagaga gam’i karayo booska uu taagan yahay.
Conor Coady | Wolves
Wuxuu ku dhashay St Helens oo ka tirsan gobolka Merseyside ee ay ka dhisan tahay Liverpool, waxaanu ku koray isla magaalada Liverpool oo uu ka bilaabay ciyaarta kubadda cagta.
Tababare Jurgen Klopp ayaa la sheegay inuu isku dayi doono inuu Wolves kala soo saxeexdo 27 jirkan reer England oo xulka qarankiisa u saftay kulamadii caalamiga ahaa ee toddobaadkii hore.
Milan Skriniar | Inter Milan
Tottenham ayaa si weyn u xiisaynaysayt Milan Skriniar oo u ciyaara Inter Milan, laakiin Liverpool kaga soo jiidasho badan dhinaca suuqa, waxaana difaacan reer Slovakia uu aqbali doonaa inuu usoo dhaqaaqo Anfield maadaama ay muuqato in kooxdiisu ay danaynayso inay lacag ku sarrifato.
25 jirkan ayaa waddankiisa u saftay 33 ciyaarood.
Tiir-dhexaad ayuu u yahay Villarreal, waxaase lala xidhiidhinayay labada kooxood ee horyaalka Premier League ee Arsenal iyo Manchester United. Pau Torres, waxa uu horeba ugu jiray bartilmaameedka Jurgen Klopp oo ay diiraddiisu haysay.
23 jirkan reer Spain ayaa cimrigiisa ciyaareed oo dhan kusoo qaatay Villarreal, waxaanay hibadiisa kubbadeed qaan-gaadh noqotay xili ciyaareedkii 2018-19 oo uu amaah ku qaatay Malaga.
Caglar Soyuncu | Leicester City
Sidii horeba u dhacday ee ay Harry Maguire uga iibiyeen Manchester United, kooxda Leicester City waxay mar kale ogolaan karaysaa inay lacag ku badalato xiddigaheeda ugu wanaagsan.
Caglar Soyuncu lacag jaban kuma heli doonto Liverpool, laakiin 24 jirkan reer Turkey ee heerka caalami ah, waxa uu u qalmaa wax kasta oo ay Reds ka bixiso.
Waa difaac kale oo Turkey u dhashay oo horeba loo sheegay in Liverpool ay doonaysay inay lasoo saxeexato.
Ozan Kabak bishii March ayay da’diisu noqotay 20 jir, waxaanu ku jiraa ciyaaryahannada 20ka ah ee ku tartamaya xiddiga sannadka ee da’yarta.
Jules Koundé | Sevilla
Waa 21 jir ay kooxo badan la dhacsan yihiin qaab ciyaareedkiisa, waxaana si weyn u doonaysay Manchester City ka hor itnii aanay Benfica kasoo qaadanin Ruben Diaz.
21 jirkan Faransiiska ah ee Julen Kounde ayaa ka mid noqday difaacyahannada lala xidhiidhinayo Liverpool ee ay lasoo saxeexan karto si uu qayb uga noqdo xalka dhaawaca Virgil van Dijk.